Ndatyora Mutemo Wevabereki Vangu, Ndoita Sei? | Vechidiki Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bislama Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Maltese Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Oromo Pangasinan Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tojolabal Turkish Twi Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndatyora Mutemo Wevabereki Vangu, Ndoita Sei?
Mhuri dzese dzine mitemo, yakadai sekuti mwana anofanira kunge ava pamba nguvai, mashandisiro aanoita foni, tsika dzaanofanira kuva nadzo, nezvimwewo.
Ko kana ukatyora mutemo wevabereki vako? Haugoni kuchinja zvinenge zvaitika, asi unogona kuedza kuita kuti zvinhu zvisawedzere kuipa. Nyaya ino ichakuratidza kuti ungazviita sei.
Kana vabereki vako vasiri kuziva kuti wakatyora mutemo wavakakupa, unogona kuva pamuedzo wekuvhara-vhara nyaya yacho.
Kana vasiri kuziva kuti une mutemo wawakatyora, unogona kunzwa uchida kupa tuzvikonzero kana kuti kuda kupa mumwe munhu mhosva.
Kuita izvi hakuzokubatsiri. Nei? Nekuti kuvharidzira zvakaitika kana kuti kupa tuzvikonzero zvinhu zvinoitwa nevana. Zvinongoratidza vabereki vako kuti hausati wakura.
“Kunyepa hakubatsire. Nekufamba kwenguva chokwadi chichabuda pachena uye chirango chauchazopiwa chinenge chakura kupfuura kudai wakangotaura chokwadi pakutanga.”—Diana.
Bvuma mhosva yako. Bhaibheri rinoti: “Munhu anofukidza zvivi zvake haazobudiriri, asi wese anoreurura ozvisiya achanzwirwa tsitsi.” (Zvirevo 28:13) Vabereki vako vanoziva kuti unombotadzawo. Asi havadi kuti uvanyepere.
“Vabereki vako vachakunzwira tsitsi kana ukavaudza chokwadi. Kana ukataura chokwadi sezvachiri, vachawedzera kuvimba newe.”—Olivia.
Kumbira ruregerero. Bhaibheri rinoti: “Pfekai kuzvininipisa.” (1 Petro 5:5) Zvinotoda kuzvininipisa kuti munhu ati “ndine urombo” uye kuti asape tuzvikonzero.
“Munhu anoramba achipa tuzvikonzero anokanganisa hana yake zvekuti inopedzisira isisarove. Nekufamba kwenguva anenge asisanetseke nekuita zvinhu zvakaipa.”—Heather.
Bvuma kurangwa. Bhaibheri rinoti: “Teererai kurayirwa.” (Zvirevo 8:33) Pane kuramba uchingochema-chema, teerera zvaunenge warambidzwa kuita nevabereki vako.
“Ukaramba uchigunun’una uchatowedzera chirango chako, uye nyaya yacho inobva yaita hombe. Edza kubvuma chirango chaunenge wapiwa, uye usanyanye kufunga nezvezvinhu zvaunenge usisakwanisi kuita.”—Jason.
Shanda nesimba kuti vabereki vako vavimbezve newe. Bhaibheri rinoti: “[Bvisai] unhu hwekare hunoenderana nemararamiro amaimboita uye huri kuodzwa maererano nekuchiva kwahwo kunonyengera.” (VaEfeso 4:22) Ramba uchiita zvakanaka, kuti vakwanise kukuvimba.
“Kana ukaramba uchiita zvisarudzo zvakanaka, vabereki vako vachaona kuti hauzodzokorori zvawakakanganisa, uye vachapedzisira vava kuvimba newe zvekare.”—Karen.
ZVAUNOGONA KUITA: Ita zvakawanda kupfuura zvavanenge vakakuudza kuti uite. Semuenzaniso, kana paine kwawaenda, unogona kufonera vabereki vako uchivaudza kuti wava kudzoka, kunyange usiri kunokoka kudzoka. Izvi zvichaita kuti uite seuri kuvaudza kuti, ‘Ndinoda kuti muvimbe neni zvekare.’
“Paunovanzira vabereki vako zvawakaita, unenge uchitovanyepera. Zvawakaita zvichapedzisira zvabuda pachena, uye zvinhu zvichabva zvawedzera kukuipira pane zvazvaizoita kudai wakagara hako wataura chokwadi.”—Darius.
“Patinopa mumwe munhu mhosva yezvinhu zvatakaita, tinoratidza kuti tichiine pfungwa dzemwana mudiki uye hatisati takura zvakakwana kuti tibvume zvatinenge takanganisa. Vabereki vedu vanopedzisira vasisavimbe nesu kana tisina kukumbira ruregerero nezvezvinhu zvatakaita.”—Sierra.
Kudzokorora: Ndatyora mutemo wevabereki vangu, ndoita sei?
Bvuma mhosva yako. Vabereki vako vanoziva kuti unokanganisawo. Asi havadi kuti uvanyepere.
Kumbira ruregerero. Taura kuti “ndine urombo” nemwoyo wese, uye kunda muedzo wekuda kuzopa tuzvikonzero.
Bvuma kurangwa. Teerera zvinhu zvaunenge warambidzwa kuita nevabereki vako.
Shanda kuti uvimbwe newe. Ita zvinhu zvinoita kuti vabereki vako vavimbe newe zvekare.
Uri kutambudzika nemitemo yepamba yakaiswa nevabereki vako here? Heano mazano anogona kukubatsira kuti uve nemaonero akanaka.
Funga nezvemitemo yauri kuona ichikuomera kuteerera.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndatyora Mutemo Wevabereki Vangu, Ndoita Sei?
ijwyp nyaya 100